Azụmaahịa na Ọdịnihu Ahịa Ahịa | Martech Zone
Lọ ahịa na-agbanwe ngwa ngwa - ma n'ịntanetị ma n'ịntanetị. Na omenala, ụlọ ọrụ ndị na-ere ahịa na-enwekarị oke uru na oke dị elu iji mepụta nsonaazụ azụmaahịa ha chọrọ iji lanarị. Anyị na-ahụ ntụgharị ngwa ngwa na mkpọsa ahịa n'oge a ebe teknụzụ na-eme ngwa ngwa na ịbawanye arụmọrụ. Lọ ahịa ụlọ ahịa ndị na-adịghị erite uru na-anwụ… mana ndị na-ere ahịa na teknụzụ teknụzụ nwere ahịa ahụ.
Mgbanwe igwe mmadụ, mgbanwe teknụzụ, na ndị na-azụ ahịa maka ọrụ ndị ọzọ ahaziri iche na-agbanwe ụzọ maka njem mkpebi ndị ahịa.
McKinsey na ahia na-ekpughe ihe ha kwenyere bụ ihe ọhụrụ Anọ P nke Ahịa:
Gbasaa - ndị mmadụ na-azụ ahịa ebe ọ bụla ha nọ - ma ọ bụ na akwa ya na mbadamba ma ọ bụ mgbe ha nọ n'etiti ụlọ ngosi gị.
Na-ekere òkè - ndị mmadụ na-aga ịmepụta na ịkekọrịta ọkwa na nyocha na ntanetị nke ụlọ ọrụ, ngwaahịa na ọrụ.
ahaziri - ogbe na gbawara omenala ahịa na-aba na-adịghị arụ ọrụ. Njikọ mmetụta uche site na akụkọ yiri ya na-eme mgbanwe.
Nhazi - ngwa mkpanaka, nyocha ịntanetị na ngwaọrụ mmekọrịta na-enyere ndị na-azụ ahịa aka ịchịkwa ahịa ha site na usoro nke aka ha.
Tags: CommerceecommerceMcKinseyMcKinsey & Companylọ ọrụazụmahịaịzụ ahịa n'ịntanetịna-ekere òkèahaziriju ebe niileọgwụretailteknụzụ mkpọsashopping